Sida loo abuuro qoraalo qarsoon taleefankaaga Xiaomi | Androidsis
Sida loo abuuro qoraallo qarsoodi ah taleefankaaga Xiaomi
Xiaomi Waa mid ka mid ah soo saarayaasha noo oggolaanaya inaan ku helno xulashooyin badan farahayaga, wax dabiici ah oo wax badan ka shaqeeyay lakabkeeda MIUI. Ikhtiyaarrada gudaha ayaa sidoo kale noo oggolaanaya inaan helno waxyaabo faa'iido badan yeelan kara, oo ay ka mid yihiin samee qoraallo aan qarin karno si loo duubo macluumaadka.
Qoraalladaan sirta ah waxay kaliya ku shaqeeyaan taleefannada Xiaomi, waxaa lagu ilaalin doonaa furayaasha sirta ah si aan qofna u heli karin waqti kasta. Qalabka Xiaomi wuxuu u baahan doonaa MIUI si qoraaladaasi u yeeshaan awood cad haddii aan rabno inaan keydinno farriin, PIN ama fure muhiim ah.
1 Sida loo abuuro qoraallo qarsoodi ah terminaalka Xiaomi
2 Qoraalada aan la geli karin
Sida loo abuuro qoraallo qarsoodi ah terminaalka Xiaomi
Abuuritaanka qoraaladan qarsoon ee Xiaomi kaliya raac dhawr talaabo oo fudud, ma qaadan doonto wax ka badan daqiiqad. Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaan ka warqabin shaqadan, taas oo ku anfaci karta marka ay timaado ilaalinta iyaga oo galaya lambar sir ah oo kaliya aan ogaan doono.
Si aad u abuurto qoraalka qarsoon waa inaad aadaa barnaamijka «Qoraalada», xagga sare ka soo riix qaybta kore hoos oo farta ku hay si aad u furto qaybta "Qoraalada Qarsoon". Markay "Qoraalada Qarsoon" furmaan Ku xir qaybtan qaab aad ku horjoogsan karto gelitaanka qoraaladan casriga ah.
Qarintu waxay qaadan doontaa ilbidhiqsiyo maadaama ka hortagistoodu ay muhiim noqonayso haddii aan rabno inay qarsoodi noqdaan, waad keydin kartaa macluumaad qiimo leh si aad u ilaaliso Xusuusnow inaad ogaato qaabka loo furayo wakhti kastamaadaama ay muhiim tahay haddii aad rabto inaad mar kale marin u hesho qoraalada.
Qoraalada aan la geli karin
Xiaomi ayaa ka shaqeeyay amniga astaantan, sida in aysan macquul aheyn in la galo haddii aadan laheyn qaabka, taas oo aad ku kala duwanaan karto haddii aad rabto inaad naftaada u haysato dhammaan qoraalada qarsoon ee aad abuureyso. Shaqadan ka sakow, waxaa jira hawlo badan oo la heli karo oo aan kuu soo bandhigi doono bishan oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo abuuro qoraallo qarsoodi ah taleefankaaga Xiaomi
Honor 20 iyo Honor 20 Pro ee Yurub waxay bilaabayaan inay helaan Magic UI 3.1 oo ku saleysan Android 10
Isku milmaan unugyo isku heer ah si aad uga caawiso geesiyaashaaga Hero Ball Z